रसदार र खस्ता Schnitzel: निर्धारण विनीज क्लासिक र यसको परिमार्जनहरू
Schnitzel, जो तल देखाइएको छ को नुस्खा, को Austrians फिर्ता XV शताब्दीमा आविष्कार। तर, यो तथ्य जो उत्तरी छिमेकी केवल "milanesa" आफ्नो प्रतिलिपि अधिकार चोरेछ भनेर विचार इटालियनहरू, सहमत छैन। thinly कटा र जीवित बाछाको मासु टुक्रा देखि खोसिएर नाङ्गै लिन पर्याप्त - तर निष्पक्षता मा वीनर Schnitzel लागि मासु सधैं पतली भान्सा हथौडा हुँदैन भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। को लास को भागहरु कस्तो देखि, मासु काट्न? यो स्पष्ट छ। अष्ट्रीया देखि अनुवाद शब्द "schnitzel" अर्थ "काटन।"
विशाल, ब्रेडक्रंब को एक स्वर्ण, कुरकुरा कोट मा बीफ को रसदार टुक्रा सम्पूर्ण प्लेट कवर। यो एउटा वास्तविक जस्तो हुनुपर्छ विनीज schnitzel। यस नुस्खा यो धेरै अवस्था पालन गर्न पर्याप्त छ, एकदम सरल छ। पहिलो - उच्चतम श्रेणी को सही मासु। यो एक क्लिपिङ हुनुपर्छ। स्वाभाविक, बोसो र नसाहरु तहहरू बिना। दोस्रो नियम -5मिमी, फाइबर वा "पुतली" (खुला पुस्तक जस्तै) मार्फत काटन, पातलो छ। गर्न breading को schnitzel देखि गिर छैन, तपाईं पहिले पीठो एक टुक्रा रोल गर्नुपर्छ। त्यसपछि कुटपिट अन्डा मा डिप। र अन्तमा - टुकडा नयाँ रोल ताजा रोटी पस्त। र अन्तिम अवस्था - बोसो धेरै। घिउ वा सुंगुरको बोसो राम्रो खुसीले गदगद हुनुपर्छ, र पकवान भविष्य बस मा डुबा गर्नुपर्छ।
तर तला वीनर Schnitzel पैन मा मात्र। नुस्खा दुई तीन प्रत्येक पक्षमा मिनेट उच्च गर्मी मासु पकाउन र त्यसपछि गर्न पैन, तैयार गरे कागज मा पारित सल्लाह दिएको छ। Succulence र एक सुखद कमी मासु ओवन मा हुन्छ। 100 डिग्री को कम गर्मी सेटिङ मा 15-20 मिनेट लागि त्यहाँ पकड। तर सबै छ। एक schnitzels भट्टीमा पछि फेरि घिउ केही चमचा एक गरम पैन धारण गर्नुपर्छ। एकछिन को लागि, बारी र अलिकति भिजेको भान्सा तौलिया। कागति को एक टुकडा संग सेवा, कटा साग संग छिडकना।
बाछाको मासु भन्दा फिड मा नुनीन भने (त्यसैले मासु juiciness राख्ने हुनेछ), सुँगुर को मासु cutlet नुस्खा एक सानो अलग गरिरहेको सुझाव। पनि tenderloin लिएको। टुक्रा हल्कासित बन्द पिटे गर्नुपर्छ। मसला र नुन धेरै काटन मा थपियो। पोर्क सुंगुरको बोसो वा वनस्पति तेल को एक ठूलो रकम मा तला, ट्रिपल कुटपिट मा पाठ्यक्रम अघि मा तोड्न,।
कुनै कम स्वादिष्ट (र थप आहार) हुनेछ चिकन वा टर्की schnitzel। यस नुस्खा यसको लागि खुली स्तन चरा प्रयोग सुझाव। पट्टिका पातलो तहहरूमा कटौती गर्न, हल्कासित बन्द हरायो। आटा मा, नुन र मसला, मासु रोल टुक्रा थप्न अन्डा तिनीहरूलाई डिप, त्यसपछि breaded। प्रत्येक पक्षमा केही मिनेट लागि गरम तेल को एक ठूलो रकम मा भुट्नु।
तपाईं एक घर जमीन मासु छ भने, त्यसपछि तपाईं धेरै मूल पकवान "Schnitzel कटा।" बनाउन सक्छ नुस्खा (खैर, अस्ट्रिया देखि पनि) एक सानो काम मासु संग यो पैन मा फैलाउन अघि प्रदान गर्दछ। बासी रोटी रोल देखि,, को पाप्रो कटौती टुक्रा मा pokromsat भारी क्रीम खन्याउन। लेमन राम्रो grater मा, पानी उम्लिरहेको संग जला दिन, को zest हटाउन। को कीमा बनाएको हिलाओ अन्डा रोल, zest, नुन र मरिच wrung। भिजेको हात समतल patties आकार, को ब्रेडक्रंब तिनीहरूलाई रोल। ओवन खोल्नुहोस्। को schnitzels शाब्दिक घिउ संग एक पैन, एक fireproof पकवान राख्नु हट मा पन्ध्र मिनेट तलना। बाँकी बोसो मा पैन, एक सानो शोरबा थप्न अनुमति जोश तिनीहरूलाई घिउ एउटा सानो टुक्रा राख्नु जो बर्गर, खन्याउन। 180 डिग्री मा 10 मिनेट को लागि ओवन मा Dopekayut।
पोर्क tenderloin: सबै अवसरका लागि व्यञ्जनहरु
Kefir मा डोनट - संसारभरि प्रेम गर्दै!
कसरी Windows मा, यो सिस्टम संग "हत्या" रजिस्ट्री सफा गर्न?
को Motherboard लागि ब्याट्री: वास्तविकता वा मिथ्या
"खोदने": रूसी अभिनेता रद्दीटोकरीमा सन्दर्भ
Osteochondrosis मा निर्वात चिकित्सा (समीक्षा)